Michael Papajohn – Cast – Burmese Subtitle
IMDB: 5.5/10 169,687 votes
The Bourne Legacy (2012) မတ်ဒေမွန် (Matt Damon) က စီအိ်ုင်အေ အေးဂျင့်ဟောင်း ဂျေဆန်ဘွန်း အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Jason Bourne ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ရုပ်ရှင်ရုံမှာ အစိမ်းသက်သက် သွားကြည့်ရင် တစ်လုံးမှ နားမလည်ပဲ သွက်သွက်ခါ သွားနိုင်စရာရှိပါတယ်။ ၁-ဂျေဆန်ဘွန်း ဘာကြောင့် အသက်လုပြေးနေရတာလဲ ? ၂-ဂျေဆန်ဘွန်းကို စီအိ်ုင်အေ က ဘာကြောင့် တွေ့ရာသင်္ချိုင်း ဓားမဆိုင်း လိုက်သတ်ချင်နေရတာလဲ ? ၃-ဂျေဆန်ဘွန်း ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ရတဲ့ အော်ပရေးရှင်းထရက်စတုန်း (Operation Treadstone) ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် တွေကရော ဘာတွေလဲ ? ၄-အော်ပရေးရှင်းဘလက်ခ်ဘရိုင်ယာ (Operation Blackbriar) ကရော ဘယ်လို ဘယ်လိုစစ်ဆင်ရေးမျိုးလဲ ? ၅-တစ်ခါ အော်ပရေးရှင်းအောက်တ်ကမ်း (Operation Outcome) နဲ့ ပတ်သက်မိတဲ့ အေးဂျင့် အေရွန်ခရော့စ် ကပါ ဘာကြောင့် ခွေးပြေးဝက်ပြေး ပြေးနေရတာလဲ ? ဒါတွေသိထားမှ ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြည့်လို့ နားလည်မှာ။ ...
IMDB: 6.7/10 268,282 votes
Hulk (2003) Hulk (2003) သည် IMDb 5.7/10 Rotten Tomatoes 62% Metacritic 54% Google users 77% ဒါရိုက်တာ Ang Lee ရိုက်ကူးထား၍ Stan Lee, Jack Kirby တို့က Marvel ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းကို မှီငြိမ်း၍ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action , Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… မျိုးရိုးဗီဇ သုတေသပညာရှင် ဘရု့စ် ဘန်နာက စမ်းသပ်မှု ရလာဒ်တစ်ခုကြောင့် မတော်တဆ ပုံစံပြောင်းသွားတာက ဒေါသထွက်လာရင် ကြောက်စရာ လူစိမ်းကောင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြည့်ကြပါခင်ဗျာ Reviwed Credit to Win Kyaw Thu File ...
IMDB: 5.7/10 234,677 votes
Transformers: Revenge of the Fallen (2009) Transformers ရဲ့ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆမ် ဝစ်ဝစ်ကီ က အော်တိုဘော့တွေနဲ့ကျောခိုင်းပြီးတော့ သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ နေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ကောလိပ် တက်ဖို့သွားခါနီးမှာဘဲ ပထမ Transformers တုန်းကကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ကုဗတုံး ရဲ့စွမ်းအင်အပိုင်းအစလေးကိုထိမိတဲ့အခါမှာတော့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ သင်္ကေတတွေကို မြင်မိပြီးတော့ ဒီဆပ်တင်ကွန် တွေရဲ့ ပစ်မှတ်က သူ့စီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့... File Size – 2.39 GB Quality – Blu-Ray 1080P 6CH Running Time – 2h 30min Format – mkv Genre – Action, Adventure, Sci-Fi Translator – Kyaw Lwin Tun Encoded By – Burmese Subtitle Team
Dawn of the Planet of the Apes (2014) ဒီဇာတ်ကား အကြောင်းမပြောခင်မှာ Planet of the Apes အကြောင်း နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်။ Planet of the Apes ဇာတ်လမ်းတွေက ၁၉၆၈ ထဲက စတင် ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ Planet of the Apes (February 8, 1968), Beneath the Planet of the Apes (May 27, 1970), Escape from the Planet of the Apes (May 21, 1971), Conquest of the Planet of the Apes (June 29, 1972), Battle for the Planet of the Apes ...
Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) Plot လွန်ခဲ့က ၃ နှစ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့် Jurassic World ပန်းခြံကြီးလည်း ပျက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ Isla Nublar ကျွန်းကြီးပေါ်က ဒီခြံပျက်ကြီးထဲမှာ ဒိုင်နိုဆောတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာနေထိုင်နေခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရုတ်တရက် လှုပ်နိုးလာတဲ့ ကျွန်းကြီးပေါ်က မီးတောင်ကြောင့် မျိုးသုန်းမှုက တစ်ခေါက်ပြန်လည်ရှင်သန်လာခဲ့ကြတဲ့ ဒိုင်နိုဆောတွေ နောက်တစ်ခါ မျိုးသုန်းဖို့ဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။ ဒါကိုကယ်တင်ဖို့ ဇာတ်လိုက်ကျော်တို့ ကြိုးပမ်းကြရာက ဒီထက်ပိုရှုပ်ပြီး အန္တရယ်ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာတွေပါ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြပါတော့တယ်။ Review The Park is Gone..again.. ရုံထဲမှာ ကြည့်နေတုန်း သတိထားမိတာက မင်းသား Chris Pratt ကိုတွေ့တော့မှ ဟာ ဒီကောင်ပဲလားဟ ဆိုတဲ့သဘောရှိတဲ့ ရေရွတ်တဲ့ အသံလေးတွေပါ။ မသိသူတွေအတွက် ထပ်ပြောရရင် Fallen Kingdom ဟာ 2015 က ထွက်ခဲ့တဲ့ Jurassic World အရဲ့ အဆက်ရုပ်ရှင်လည်းဖြစ်သလို 1993 က ...
Spider-Man3(2007) ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်ဖူးရင်တော့အကောင်ဘဲ... ဘာကောင်လဲဆိုတော့ Venom ကိုမြင်ဖူးတဲ့ကောင်ဘာ...😂😂 ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကိုအားလုံးကြည့်ဖူးပြီးသားဖြစ်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ ကလေးကောလူကြီးကောအားလုံးကြိုက်ခဲ့တာမလို့ BS ကွာလတီအလန်းဖြင့် အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ File Size – 2.22 GB Quality- Blu Ray 1080p 6CH Running Time – 2hr 19min Format – mkv Genre – Action, Adventure, Sci-Fi Subtitle – Myanmar (Hard Sub) Translator – Min Thet Oo Encoded By – Robinn Hood
IMDB: 6.2/10 451,286 votes
Spider-Man (2002) ငယ်ငယ်ကကြည့်ခဲ့ရတဲ့ ပင့်ကူလူသားကားလေးပါ။ BS ရဲ့ကွာလတီနဲ့တစ်ဖန်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်... အော် BS ကပရိတ်သတ်ကြီးကောဒီဇာတ်ကားမှာဆိုဘယ်အခန်းကို ခဏခဏ ရစ်ကြည့်တုန်း မှန်မှန်လိမ်နော်... 😂😂 File Size – 1.93 GB Quality- Blu Ray 1080p 6CH Running Time – 2hr 01min Format – mkv Genre – Action, Adventure, Sci-Fi Subtitle – Myanmar (Hard Sub) Translator – Min Thet Oo Encoded By – Robinn Hood
IMDB: 7.3/10 627,287 votes
Predator2(1990) ပထမဇာတ်ကား အပြီး ၃နှစ်အကြာမှထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ IMDB 6.3 ရရှိထားတဲ့ Sci-Fi အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ------------------- ရှေးဦးဂြိုလ်သားတွေနဲ့ ပထမဆုံး တိုက်ပွဲအပြီး ၁၀နှစ်အကြာမှာ ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်ကို ကိုယ်ပျော်ဂြိုလ်သားတွေပြန်လည် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ Los Angeles မှာ ဇာတ်အိမ်ကိုစီစဉ်ထားပြီးတော့။ ဂြိုလ်သားဇာတ်ကား ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသူတွေအတွက်ဒီဇာတ်ကားလေးက အနှစ်သာရအပြည့်အဝရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ File Size – 1.71 GB Quality – Blu-Ray 1080p 6CH Running Time – 1hr 47min Format – mkv Genre – Action, Horror, Sci-Fi Subtitle – Myanmar (Hard Sub) Translator – Myo Min Oo Encoded By – Htet Aung Moe
Escape Plan (2013) ဇာတ်လမ်းကတော့ ထောင် ( ၁၄ ) ခုကို ဖောက်လာခဲ့တဲ့ ကြေးစားထောင်ဖောက်သမား Ray Breslin အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသားကြီး Sylvester Stallone ဟာ ကမ္ဘာအကြမ်းဖက်သမားစရင်းဝင် တွေကို ထိန်းသိမ်တဲ့ ထောင်ကို ရောက်သွားပါတယ်.. ထောင်ရဲ့ အခြေနေကတော့ sona ထက်အများကြီးကို ဆိုးပါတယ်..။ အကျဉ်းသားတိုင်း အချိန်မရွေးသေအောင် သတ်နိုင်တဲ့ လုံထိန်းတွေရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းမှု အကျဉ်းသားတွေကလည်း သေရဲ သတ်ရဲ လောက်အောင် စိတ်ရိုင်းတွေ ကြီးစိုးရာထောင်.. အဲဒီမှာ ဘဏ်ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာကြီး အဖြစ် အကျဉ်းကျနေတဲ့.. Rottmayer အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသားကြီး Arnold Schwarzenegger တွေ့ကြပါတယ်.. ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်သာကြည်ြ့ပီး ခံစားကြည့်ပါ.. Review Credit to Original File Size – 1.82 GB Quality – Blu-Ray 1080P 6CH Running Time – 1h 55min Format – mkv Genre – Action, Crime, Mystery Subtitle ...
The Amazing Spider-Man (2012) ဒီThe Amazing Spidermanပထမကားလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်ပီတာ Spidermanစတင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်လေးကိုရိုက်ထားတာပါ။ အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရုံဝင်ငွေဒေါ်လာ၇၅၇.၉သန်းထိရရှိခဲ့တဲ့ကားလေးပါ။ ၂၀၀၀ခုနှစ်ပီတာတယောက်ကလေးဘ၀မှာဖခင်ဖြစ်သူရဲ့စာကြည့်ခန်းဖောက်ထွင်းခံရတာနဲ့စပြီး သူတို့မိသားစုလေးတကွဲတပြားစီဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ မိဘဖြစ်သူတွေထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားပြီးပီတာတယောက်အန်တီမေနဲ့ဦးလေးဘန်တို့ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာပဲ ကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်။နှစ်များစွာကြာပြီးနောက်ပီတာလည်းအထက်တန်းကျောင်းသားကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ အဖေ့သွေးပါသူဖြစ်တော့ဥာဏ်ထက်မြက်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲဂွမ်န်စတေစီဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဇာတ်လမ်းစတင်ခဲ့တာပေါ့။ တနေ့အိမ်မှာနေရင်းပီတာတယောက်ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အိတ်တအိတ်ကိုတွေ့ပြီး သုတေသနစာရွက်စာတမ်းဟောင်းတွေဓာတ်ပုံတွေကိုတွေ့ရှိသွားပါတယ်။ အဲဒီဓာတ်ပုံကနေတဆင့်ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တင်သိပံပညာရှင်ဒေါက်တာကာ့ကော်နာစ်တယောက် OScorpဆိုတဲ့မျိုးစိတ်ဗီဇတွေကိုသုတေသနလုပ်နေတဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်နေကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲဖခင်အကြောင်းတွေကိုသိချင်နေတဲ့ပီတာတယောက်Oscorpထဲကိုခိုးဝင်ရာကစပြီး Spidermanဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့ကျကျပြန်လည်မွမ်းမံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီကားလေးဟာတော်တော်အောင်မြင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့နောက်ပိုင်းSpidermanပေါက်စဘာတွေဘယ်လိုလူသားအကျိုးဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ကားလေးကိုပြန်စားမြုပ်ပြန်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ ~Review Credit File Size – 2.1GB Quality – Blu-Ray 1080P 6CH Running Time – 2h 16min Format – mkv Genre – Action, Adventure, Sci-Fi Translator – Wai Linn Encoded By – Htet Aung Moe
IMDB: 7.0/10 508,124 votes